प्रधानमन्त्रीज्यू म अहिले २४ वर्षकी भएँ, मलाइ बचाउनुहोस ! - Himali Patrika
प्रधानमन्त्रीज्यू म अहिले २४ वर्षकी भएँ, मलाइ बचाउनुहोस !
हिमाली पत्रिका ७ फाल्गुन २०७६, 4:26 am
प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार !
म सुनीता बिक । घर छत्रदेव गाउँपालिका–८, सिठेनी, अर्घाखाँची ।
सुनेथेँ, तपाईंले नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै हुनुहुन्छ रे । जगेडा मिर्गौला पनि राखिने रे । यो सुन्दा झन् खुसी लाग्यो ।
तपाईंलाई जस्तै रोग मलाई पनि छ । म पनि मिर्गौला बिग्रिएर थलिएको छु । म अहिले २४ वर्षकी भएँ । छिट्टै म र्दैछु भन्ने थाहा छ । तर, म म रेपछि मेरा नाबालकहरूको अवस्था के होला ?
सन्तानको माया आमालाई जति अरूलाई हुँदैन । म म रेपछि मेरो श्रीमानले अर्की श्रीमती पाउनु हुनेछ, तर मेरा बच्चाहरूले आमा पाउने छैनन् ।
म ओछ्यानमा लडिरहेकी छु । मेरा बच्चाहरू ‘आमा’ भन्दै वरिपरि झुम्मिन्छन् । म आँखाभरि आँसु पारेर उनीहरूलाई नियाल्छु । उनीहरू भोकले रुन्छन्, म खाना बनाएर खुवाउन सक्दिनँ । यस्तो जीवनलाई के जीवन भन्नु !
खुसी कुन चराको नाम हो ? मलाई थाहा छैन । जन्मेदेखि आजसम्म सुखको अनुभूति गरेकी छैन ।
म एक महिनाकी हुँदा मेरी आमा बि त्नु भएको रे । मैले आमाको माया र काखको न्यानो पाउने कुरै भएन । आमाको मृ त्युपछि बुवाले अर्की आमा ल्याउनु भएछ । मलाई हजुर आमाले गाउँमा निमेक गरेर हुर्काउनु भयो । मैले बुझेसम्म बुवाले बाबु हुनुको कुनै कर्तव्य पूरा गर्नु भएन ।
मेरी वृद्ध हजुरआमा आँखा देख्नुहुन्न । हुर्कंदै गएपछि म हजुरआमाका लागि पनि भार भएछु । १६ वर्ष नपुग्दै हजुरआमाले बिहे गराइदिने कुरा गर्नुभयो । अखिर अर्काको घर जानु नै पर्‍यो । म रुँदै श्रीमानको घर भित्रिएँ । यहाँ आएदेखि नरोएको कुनै दिन छैन ।
उता, हजुरआमा एक्लै हुनुभयो । उहाँको चिन्ताले रातभरि निद्रा लाग्दैनथ्यो । बुहारी मान्छे, चुलो–चौको, घाँसदाउरा सम्हाल्नै पर्यो । त्यसमाथि माइतीमा जस्तै गरिबी र अभाव थियो ।
बिहे गरेकै वर्ष दुई जीउकी भएँ । सानै उमेरमा बच्चा जन्माउन खतरा हुन्छ भन्थे । शरीर कमजोर भइरहेको थियो । म ‘भगवान् भरोसा’मा थिएँ । ९ महिनापछि छोरा जन्मियो । अब म आमा बने । बच्चा स्वस्थ थियो । तर, म पोषिलो खाने कुराको अभावमा कमजोर बन्दै गएँ ।
घरको काम र घाँस–दाउरा गर्दै बच्चा हुर्काउनु मलाई निकै मुस्किल भयो । पैसा अभाव भएपछि ६ महिनाकी सुत्केरी मलाई छोडेर श्रीमान भारततिर लाग्नु भयो ।
श्रीमान् हिँडेको केही दिनमै मलाई वाक–वाकी लाग्न थाल्यो । टाउको दुख्ने, रिंगटा चल्ने, काममा जाँगर नलाग्ने, खाना नरुच्ने समस्याबाट म गुज्रिन थालेँ । महिनावारी पनि रोकियो ।
सुत्केरी शरीर तंग्रिन पाएको थिएन, पेटमा अर्को बच्चा आयो । म आत्तिएँ, रोएँ, कराएँ, आफैंलाई धिक्कारे । तर मैले वास्तविकता भोग्नै पर्थ्यो ।
मैले श्रीमानलाई फोनमा रुँदै भने, “म फेरि दुई जीउकी भएछु, तपाईं नेपाल आउनु पर्‍यो ।” पैसा नभएको भन्दै उहाँ फर्किन मान्नु भएन । ‘जे पर्ला त्यही भोगौंला’ भनेर बस्न म विवश बने ।
श्रीमान् भारत गएको ८ महिनामा मैले अर्को बच्चा जन्माएँ । छिमेकी र आफन्तले मेरो स्याहार गरे । सानो छोरा ६ महिनाको भएपछि उहाँ घर फर्किनु भयो ।
बच्चाहरू सानै भएकाले मैले उहाँलाई इन्डिया नफर्किन भनेकी थिएँ । तर, पैसाको अभावका कारण उहाँ फेरि जानुभयो । दुःख त हामी महिलाले मात्र भोग्नुपर्ने रहेछ । आफ्नै जिन्दगी आफैंलाई भारी भएको महसुस हुन्थ्यो । मुटु चिरिन्थ्यो । बच्चाहरूलाई हेरेर चित्त बुझाउँथेँ ।
सानो छोरा २ वर्षको भएपछि मलाई अनुहार भरी घाउखटिरा हुने, सुन्निने, दुख्ने हुन थाल्यो । सासुले धामी झाँक्रीलाई देखाउनुभयो । गाउँकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि उपचार गरेँ । सदरमुकामसम्म जान पैसा थिएन ।
मैले फोन गरेर सबै कुरा बताएपछि श्रीमान् घर आउनुभयो । उहाँले मलाई जिल्लाको अस्पताल लैजानु भयो, तर रोग बीसको उन्नाइस् नभएपछि गाउँमै ऋण खोजेर इन्डिया लैजानु भयो । दिल्लीको वर्धमान महावीर मेडिकल कलेजमा मलाई ‘लुफस मेट राइटिस’ रोग लागेको पत्ता लाग्यो । सोही रोगका कारण मेरो दुवै मिर्गौला बिग्रिएका रहेछन् ।
म धेरै रोएँ । ऋण खोजेको पैसा सकियो, उपचार गर्न पैसा थिएन । बाँच्ने आशा
मर्‍ यो । गरीबले बाँच्ने आशा राख्नु पनि मुर्खता रहेछ । बाँच्ने रहर आर्थिक औकात हुनेहरूका लागि मात्रै रहेछ ।
मलाई श्रीमानले गाउँमा फर्काउनु भयो । म अहिले मृ त्यु पर्खिरहेकी छु । नाबालकहरूलाई छोडेर म र्दैछु भन्ने पीडाले दिन–रात सताइरहेको छ ।
तपाईं हाम्रो अभिभावक, मेरो पीडा सुन्नु प्रधानमन्त्रीज्यू ।
म बाँच्न चाहन्छु, तर उपचार गर्ने पैसा छैन । सम्पत्तिका नाममा एउटा टिनको छाप्रो छ । मि र्गौला बिग्रिएका बिरामीलाई नियमित डाइलासिस गर्नुपर्छ भन्छन् । तर तम्घाससम्म पुगेर सिटामोल किन्न सक्ने क्षमता छैन मेरो ।
मेरोे समस्या पनि तपाईंको जस्तै भएको हुँदा कुरा सन्नु हुन्छ भन्ने आशा छ । फेरि तपाईं त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । चाहानु भयो भने मजस्ता मिर्गौल पीडितहरूका लागि निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई बचाउनुस् । मलाई नबचाउने भए मेरा नाबालक छोराहरूलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाई दिनुहोला । उनीहरूले पढेर मजस्ता थुप्रै मिर्गौला रोगीहरूको उपचार गर्नेछन् ।
प्रस्तुति : रिता बुढाथोकी, लेख साभार : अनलाइनखबर